Brezila: Fampisehoana vetaveta amin’ny aterineto, haino aman-jery sosialy ary ny andrikitry ny ray aman-dreny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2010 9:39 GMT
Tany amin'ny manodidina ny misasakalin'ny 24 Jolay, nisy tovolahy 16 taona niaraka tamin'ny tovovavy sipany 14 taona nanomboka nampiasa ny lamaody vaovaon'ny “fampisehoana vetaveta” amin'ny Twitcam – Fahitalavitra mivantana an'ny Twitter. Nandritra ny minitra vitsivitsy, maherin'ny 25000 ireo mpampiasa blaogy kiritika no afaka nijery ilay tovovavy nanaovana herisetra nifaneken'ny andaniny sy ny ankilany. Conceição Oliveira, manoratra ho an'ny blaogy Vi o Mundo [pt], dia manana vaovao fanampiny maromaro:
Manodidina ny 25000 teo ho eo ireo mpijery (olon-dehibe sy tanora) nanaraka mivantana ary miloko, tovovavy izay nanambara taty aoriana kely fa 14 taona , nipetraka teo am-pofoan'ny sipany, nanaiky ny hanaovana herisetra aminy. Nandritra ny fandefasana azy iny alina iny dia nisy nandrakitra ilay horonantsary , ireo sary sasany mampiseho ireo fotoana mafana dia “navoaka” (nadika ho sary failo avy amin'ny sarin'ny solosaina avy hatrany) ary nameno ny aterineto nifanindran-dàlana tamin'ny fandefasana azy. Ao amin'ny Twitter, ‘@damzinho’ no pejin'ilay tovovavy, izay mifandray amina pejy hafa toa ny FormSpring (kaonty fametrahana fanontaniana sy famaliana azy, misoratra ao amin'ny twitter ihany koa), Orkut, Youtube sns.
kaonty Twitter an'i @damzinho, izay nofafàna talohan'ny niposahan'ny masoandro. Google
Ilay tovolahy dia nampanantena fa haka ny maha-virjiny an'ilay tovovavy rehefa feno 20.000 ny isan'ny mpijery azy ao amin'ny twitcam. Na dia teo aza ireo fangatahan'ny mpijery dia tsy nanao firaisana teo anoloan'ny “camera” izy roa nandritra ny fampisehoana adiny roa, fa na ilay horonantsary na ny valiny nihanaka be dia ampy nahatohina ny firenena. Maro ireo mpampiasa Twitter sy mpitoraka blaogy no nanomboka nanontany tena momba ny tsaho mandeha: raha tena tsy ampy taona marina tokoa izy roa, raha fanodinkodinana zaza tsy ampy taona, ary na ny mety haha-mpiray tampo azy roa mihitsy aza. Ny Despojos dia anisan'ireo blaogy voalohany naneho hevitra manohitra [pt] ilay horonantsary fampisehoana vetaveta, izay raha ny heviny dia adihevitra lehibe indrindra tamin'iny andro iny, na ny tamin'iny volana iny mihitsy aza:
Ankoatra ny fampisehoana zaza tsy ampy taona, izay efa zavatra mampihorohoro, ny sasany aza milaza fa ilay vehivavy niaraka tamin'i “damzinho” dia anabaviny ary mamo izy – izay tsy mamafa na inona na inona amin'ny hadalàny fa vao maika manaratsy ny toe-javatra.
Manazava [pt] ny tohin'ilay adihevitra be i Conceição Oliveira :
Na izany na tsy izany, androany, raha nanambara ny gazety Zero Hora [pt] fa hanao fanadihadiana momba ity zatovo ity ny mpitandro filaminana, namorona kaonty Twitter hafa kosa izy nampiana litera iray ary nanokatra indray ny “twitcam-ny”. Miaraka amin'ilay tovovavy naseho tamin'iny alina iny ihany, nisotro sokolà misy ronono izy sady nidoka tena no nanazava ny zava-nitranga. Ilay tovovavy kosa namaly ny sasany tamin'ireo fanontaniana avy amin'ireo andian-jatovo nifanesika tany amin'ilay kaonty twitcam vaovao an'ilay tovolahy, izay miha-malaza hatrany. Izany no fandehany amin'ny aterineto, mamafa kaonty amin'ny potsitra iray ianao dia mamorona vaovao amin'ny potsitra iray hafa.
Tamin'ny tafatafa tamin'ny Alatsinainy atoandro, niteny ilay tovovavy fa 14 taona izy, very ny ‘fahadiovany’ tamin'ny faha-13 taonany ary nandritra ny fiarahany tamin'ilay tovolahy nanao herisetra taminy teo alohan'ny “camera” tamin'ilay alina iny izany. Nony nanontaniana izy raha faly tamin'ny zava-bitany dia namaly hoe “tsia”, nefa niteny fa resy tamin'ny filokàna izy ka tsy maintsy nandoa ny vidiny. Niara-nilalao [karatra] Uno izy roa tamin'ny vao mangiran-dratsy ka izay resy dia tsy maintsy manao ny sitrapon'ny iray eo anoloan'ny twitcam. Fanontaniana mipetraka: inona no ataon'ny tovovavy 14 taona ao amin'ny efitranon'ny namany 16 taona amin'ny misasakalina?
After all, it seems that a case of online sexting shows how Brazilian teenagers behave while not within reach of their parents. Carol Giarrante wonders [pt] what is at stake Taorian'izay dia namoaka horonantsary tamin'ny YouTube [pt] ilay tovolahy manazava izay tena nitranga, raha ny renin'ilay tovovavy kosa tojo ny tsy nampoizina ka, nanasazy azy [pt] tsy hahazo alalana amin'ny aterineto mandritra ny iray volana, ary ny mpitandro filaminana Breziliana dia manao fanadihadiana momba ilay tranga. Fa amin'izany rehetra izany, ny trangana fampisehoana vetaveta amin'ny aterineto koa toa mampiseho ny fitondrantenan'ireo tanora Breziliana rehefa tsy eo imason-dray aman-dreny. Manontany tena [pt] ny amin'izay tena idiran-doza i Carol Giarrante:
Ny tena irian'ny ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao dia ny mba ho lasa olo-malaza, tsy olana na inona na inona ho takalon'izany. Tsy olana na mandritra ny 15 minitra, iray alina, iray andro na iray volana. Ary ireo tambajotra sosialy, mazava ho azy, no fitaovana tsara indrindra hanatrarana izany tanjona izany.
Andressa Mendes, 15 taona, avy amin'ny blaogy Genéricos e Sintéticos [pt], dia manontany tena raha tena mety sy tokony ho izy tokoa ho an'ireo tanora tahaka azy ny hanao ny zava-drehetra mba halaza:
Ary ankehitriny dia ilaina mihitsy hatramin'ny fisehoana eo alohan'ny twitcam ho an'ny olon-tsy fantatra ve, mba hahazoana mpanaraka maromaro kokoa fotsiny? Mety ve izany, sa efa anti-pisainana loatra aho? Tsy mitovy hevitra amin'izany aho… Mino aho fa mila miova ity fahatanoràna ity…
Paulo Henrique, avy ao amin'ny blaogy Wherever dia manan-kambara [pt] momba izany:
Ny tena mampalahelo amin'ity tantara ity dia ny fanaovana zavatra toy ireny tsy misy fandinihana lalina. Izao, ‘ndeha isika hanaiky fa miaina ao anatina tontolo iray ahazoana ireo karazam-baovao rehetra amin'ny alalan'ny potsitra vitsy monja. Ankehitriny miaraka amin'ny anaran'ilay “naha-tara” anao tamin'ny IM ianao afaka mahazo ny mombamomba azy toa ny: sekoly ianarany, fianarana ataony, toeram-ponenany, fialàmboliny, fironany ara-politika, anaran'ireo havany… sy ny maro hafa. Ka ahoana no ahafahan'ny olona manao ity [sexting]! Am-pahatsorana no ilazako fa adala izay tsy mba mitsinjo lavitra amin'ny fiainany.
Mety hiatrika [pt] sazy ara-tsosialy sy fepetra fanarenana ireto zatovo roa ireto. Ny mpitandro filaminana misahana ity raharaha ity koa dia manadihady ny momba ireo olona miisa telo arivo ka hatramin'ny iray alina [pt] mety ho nisintona sy nizara ilay horonantsary tamin'ny alalan'ny 4shared mba haparitaka sy hojifaina amin'ny resaka filana ara-nofo atao amin-jazakely. Ny vaovao farany dia matahotra ny handeha ho any an-tsekoly ilay tovovavy [pt] ary ao anatin'ny fahakiviana kosa ilay tovolahy. Samy manenina tamin'ny zava-nitranga izy roa ary manambara fa tsy nieritreritra ireo mety ho vokatry ny hadalàna nataony tamin'ny aterineto.